China steel ezinamacala Bar Ukwenza kunye Factory | IHuaxiao
Ibha engenamacala yeBar
I-hexagon bar licandelo le-hexagon eqinileyo enebhanti ende engenasici, ngenxa yeempawu zentsimbi ye-hexagon yesinyithi esetyenziswa kakhulu elwandle, kwimichiza, kulwakhiwo nakwezinye izinto.
Umthamo weSino Stainless ngentsimbi engenamacala ibar
Ubungakanani : 3mm-200mm, 1/8 ″ ukuya ku-8 ″
Inkcazo ngokubanzi malunga neMigangatho yeentsimbi ezingenasici
Ngokwemigangatho yokuhamba kweentsimbi ezingenasici, i-US, i-UK, iJamani, iFrance, iRussia, iJapan kunye nemigangatho yamanye amazwe iqhubele phambili, kwaye unyamezelo lobungakanani obuqhelekileyo base-US yeyona nto ingqongqo. Imigangatho yakutshanje yeeprofayili ezishushu zentsimbi ezingenazingcingo zezi: I-ASTMA276 "Ukucaciswa okuMiselweyo kweNsimbi engenasiphelo kunye neeBhari zeNsimbi eziMelana nobushushu"; I-American ASTM 484 / A484M "Iimfuno ngokubanzi zeNsimbi engenasiphelo kunye neeBhari zeNsimbi eziMelana noBushushu, iiBillets kunye nokuLibala"; I-DIN17440 yaseJamani "ImiGangatho yobuGcisa yokuHanjiswa kwePhepha leNsimbi engenasici, iStrip esongelweyo eshushu, iWire, iiNgcingo eziTsaliweyo, iBar yentsimbi, ukubumba kunye neBillet"; IJapan JlS64304 "Intonga engenazintsimbi". Ekuqaleni kwee-1980, i-China yadibanisa imigangatho yase-United States, eJapan, eJamani, kwindawo eyayisakuba yi-Soviet Union kunye ne-International Organisation for Standardization (i-ISO), kwaye yajolisa kwimigangatho ye-JIS ye-stainless steel ye-Japan, kwaye yaqulunqa i-GB1220- yesizwe. I-92 yeentsimbi zensimbi ezingenasici, ngokubhekisele kumazwe angaphandle. Imigangatho, umgangatho we-GB4356-84 kazwelonke weentonga zensimbi ezingenazingcingo sele iqulunqiwe, eyenza uthotho lwentsimbi lufezeke ngakumbi, kwaye yamkela iimveliso ezisetyenziswa kwilizwe jikelele ezinje ngeMelika kunye neJapan. Amanye amabakala e-stainless steel e-China ahambelana namabanga asemgangathweni aseMelika, njengoko kubonisiwe kwiTheyibhile 1. Kwangelo xesha, igcina amabakala aqhelekileyo asetyenziswa e-China, ngokungqinelanayo ngokuhambelana namabakala e-stainless steel kumazwe athuthukileyo afana ne-United States, kwaye inokungafani kakhulu. Xa kuthelekiswa namazwe ahambele phambili, umsantsa ophakathi kwemigangatho ngokwawo uye wehla kakhulu, kodwa umgangatho womgangatho kunye nokunyamezelana kwamacala awalunganga, kwaye umahluko kwinqanaba lomzimba mkhulu.
Inkqubo yokuveliswa kwebar yesinyithi
Inkqubo yemveliso yebar: ukwamkelwa kwebillet → ukufudumeza → ukuqengqeleka → kukucheba kabini → ukupholisa → ukucheba → uhlolo → ukupakishwa → imitha → yokugcina.
Imivalo emincinci iveliswa ngamayeza amancinci. Ezona ntlobo ziphambili zokugaya zincinci zezi: eziqhubekayo, ezinqamlezileyo kunye nezithe tyaba. Okwangoku, uninzi lwezinto ezintsha ezisetyenziswayo ezisetyenziswayo kwihlabathi. Izixhobo zokuguba zanamhlanje ezithandwayo zinendawo yokugaya ngesantya esiphezulu kunye necandelo le-4 lesivuno esiphezulu se-rebar mill. I-billet esetyenziswe kumatshini wokuqengqeleka omncinci oqhubekayo ngokubanzi yinto eqhubekayo yokuphosa, kwaye ubude becala layo li-130-160 mm, 180 mm × 180 mm, ubude ngokubanzi bumalunga ne-6-12 yeemitha, kwaye ubunzima be-billet yi-1.5 ~ Iitoni ezi-3. Imigca yokuqengqeleka ubukhulu becala icwangciswe ngendlela ethe tyaba-ethe nkqo, ukufikelela kumgca ogcweleyo wokungagungqi. Inani Racks kumiselwa kumgaqo wokuqengqeleka rack enye kunye. Izinto zokungqengqa ubukhulu becala kukudluliswa kwamanani. Kukho izinto ezili-18, ezingama-20, ezingama-22 okanye ezingama-24 zokungqusha ezincinci ezinobungakanani obungenanto kunye nobukhulu obugqityiweyo, kwaye ezili-18 zezona ziqhelekileyo. Isantya-esinokuhlengahlengiswa, uxinzelelo oluncinci kunye nokuqengqeleka okungahambelaniyo zezona zinto zibonakalisa izinto zokusila ezincinci eziqhubekayo zangoku. Icandelo lokuqengqeleka okungalunganga kunye nesakhelo sokuqengqeleka esiphakathi kulawulwa kukuxinana okuncinci. Inxalenye yokuqengqeleka okuphakathi kunye nokusila okugqityiweyo akunangxaki-ukuqinisekisa ukuchaneka kwemveliso. Iigayo eziqhubekayo zihlala zinee-6 ukuya kwi-10, kwaye zide ziye kufika kwi-12 loopers.
Ukuqengqeleka kwebha yeyona nto ilula ukuyenza kuzo zonke izinto ezisongiweyo kwaye kungenziwa ngeendlela ezahlukeneyo. Ukusuka kwi-roller-to-twist ukuya kwi-twist, ukusuka kwi-semi-ukuqhubeka ukuya kugcweleyo, imivalo inokuveliswa, kodwa isivuno sayo, ukuchaneka komlinganiso, imveliso egqityiweyo, kunye nenqanaba lokupasa zahlukile. Ubungqindilili besingqengqelo sokuloba esisezantsi sisezantsi, kwaye ukuguquguquka kobushushu bokufudumeza ngokuqinisekileyo kuya kukhokelela kuguquko kubungakanani bemveliso. Ukongeza, isantya esicothayo sekhosi kunye nexesha elide lokuqengqeleka kukhokelela kunyuko lokwahluka kweqondo lobushushu phakathi kwentloko kunye nomsila wesitokhwe esiqengqelekayo, ubungakanani abuhambelani, kunye nokusebenza akufani. Iziphumo ziphantsi kakhulu, umgangatho uguquguquka kakhulu, kwaye inqanaba lomgangatho liphantsi kakhulu. Full-oluqhubekayo lokusila ehlelayo ngokubanzi amkele tyaba kwaye enye, izahlulo ukuziqengqa azigqwethi, iingozi zincinci, imveliso iphezulu, kunye nemveliso enkulu yobungcali kunye nolawulo lwendlela yokusebenza enokufezekiswa. Kwangelo xesha, ilitye lokusila liqengqeleka lamkela ubungqongqo obuphezulu, isidanga solawulo siphezulu, kunye nokuchaneka komlinganiso kunye nereyithi yokupasa iphuculwe kakhulu, ngakumbi inqanaba lesivuno lonyukile, kunye nenkunkuma yokwenziwa kwesinyithi kwiziko lokubuyisa kuncitshisiwe. Okwangoku, ukuqengqeleka kwebha kwenziwa ikakhulu luthotho lokufudumeza inyathelo, ukuhla kwamanzi ngoxinzelelo oluphezulu, ukuqengqeleka kobushushu obusezantsi, ukuziqengqa okungenantloko kunye nezinye iinkqubo ezintsha. Ukuqengqeleka okungafunekiyo kunye nokuqengqeleka okuphakathi kuyaphuculwa ukuze kulungelelaniswe iibholithi ezinkulu kwaye kuphuculwe ukuchaneka kokuhamba. Ukugqiba umatshini ikakhulu ukuphucula ukuchaneka kunye nesantya.
Xa kuthelekiswa nokuqengqeleka okushushu kwekhabhoni eshushu, itekhnoloji yokuqengqeleka kunye nenkqubo yentsimbi engenasici ibonakaliswa ikakhulu ekuhlolweni nasekucoceni ii-ingots, iindlela zokufudumeza, uyilo lomngxunya wokuqengqeleka, ulawulo lobushushu oluqengqelekayo kunye nonyango olushushu lweemveliso.
Egqithileyo Ibha yeChannel yentsimbi engenanto
Okulandelayo: 316L316 Ingqele asongwe Stainless sheet (0.2mm-8mm)
Stainless ezinamacala Bar